သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းဆိုမှုတောင်းဆိုပြီးပါပြီ။ ဆက်လုပ်ပါ လူနာအချက်အလက်ပုံစံများ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီမှာ.
ရက်ချိန်းယူရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့နှင့်အတူဆက်လက် ရက်ချိန်းချိန်းပုံစံ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီမှာ.
ကို Select လုပ်ပါ မီးယပ်ဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု or ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှု ရက်ချိန်း။ ချိန်းဆိုမှုများအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အသစ် အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုကိုတောင်းခံပါက၊ Telehealth ခန့်အပ်မှု။ Telehealth သည်လူနာ၏ပညာပေးသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းပေးပြီးသင်၏လူကိုယ်တိုင်ချိန်းဆိုချက်သို့မလာမီအချိန်ပိုသက်သာပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနာရီများအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုအတွက်တစ်ရက်တောင်းဆိုပြီးနောက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိန်းဆိုမှုအတွက်ရက်တစ်ရက်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
သင်၏ခန့်အပ်မှုအချိန်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်ကို (သင်နှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်) သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - ချိန်းဆိုမှုများအားလုံး လူနာပညာပေးသူကအတည်ပြုလိမ့်မည် ချိန်းသည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်ကိုအတည်ပြုရန်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ 703-532-2500.
ရက်ချိန်းတောင်းဆိုချက်ကိုသင်ပြီးတာနဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏လူနာအချက်အလက်သတင်းအချက်အလက်ကိုအွန်လိုင်းဖြည့်ပါ.
မှနံပါတ်ထည့်ပါ0သို့ 99.
ပေါ်လစီ / အသင်း ၀ င်နံပါတ် #*
ပေးသူအကျိုးခံစားခွင့်များ / သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ် (ကဒ်နောက်ကျောတွင်တည်ရှိသည်)*
သင်၏အာမခံကဒ်၏ရှေ့ (နောက်နှင့်ရှေ့) ပုံကိုကူးယူရန်ဤလယ်ကွက်ကိုသုံးပါ။
ဤနေရာတွင်ဖိုင်တွေ drop သို့မဟုတ်
ဖိုင်တွေကို Select လုပ်ပါ
မက်စ် ဖိုင်အရွယ်အစား - ၁၂၈ MB၊ မက်စ်။ ဖိုင်များ - ၂ ။
မီးယပ်ရောဂါချိန်းဆိုမှု (၂ ရက်ကြိုတင်တောင်းခံပါ)*
တစ်ခုရွေးပါနှစ်ပတ်လည်ကောင်းမွန်သောအမျိုးသမီးစာမေးပွဲရုံးခန်းလည်ပတ်မိသားစုအစီအစဉ်အမှားအကဲဖြတ် / စီမံခန့်ခွဲမှုအခြားသတင်းများ
တစ်ခုရွေးပါကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေး -9ပတ်မှတဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - နိုးလော့။ ၁၂ ရက်မှတဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ - အိပ်ပျော်ခြင်း - 15 ပတ်မှတဆင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ - ဘယ်အမျိုးအစားကိုငါမသိသေးဘူးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းအကဲဖြတ်ခြင်းကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုOptions ကို၏သုံးသပ်ချက်ကို
ရက်ချိန်းယူမှုများသည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ၁.၅ - ၂ နာရီ၊ စနေနေ့များတွင် ၃ နာရီအထိ။
ရက်ချိန်းများသည် ၂.၅ မှ ၃ နာရီအထိကြာလိမ့်မည်။
တစ်ခုရွေးပါထက်နည်း 13 ပတ်13 ရက်သတ္တပတ်14 -15 ရက်သတ္တပတ်
ရက်ချိန်း ၃-၄ နာရီကြာမည်။
တစ်ခုရွေးပါတနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်း (ဆေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာနိုးသာ)အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကြာသပတေးနေ့နံနက် (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနိုးသာ)ကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲပိုင်း (ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်သာအိပ်စက်ခြင်း)သောကြာနေ့နေ့လည်ခင်းစနေနေ့အစောပိုင်းနံနက်
ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Telehealth စာမျက်နှာသို့သွားနိုင်ပါသည် ဒီမှာ။
သင်၏ TeleHealth ရက်ချိန်းအတွက်သင်နှစ်သက်သောနေ့ကိုရွေးချယ်ပါ*
၁၃ ပတ် (သို့) ထိုထက်ပိုသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုအတွက် Telehealth မှလူနာပညာကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးတိုက်တွန်းပါသည်။ သင့်အား Telehealth အသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ပြissuesနာများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
တစ်ခုရွေးပါတနင်္လာနေ့နံနက်တနင်္လာနေ့နေ့လည်ခင်းတနင်္လာနေ့ညနေအင်္ဂါနေ့နံနက်အင်္ဂါနေ့ညနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေကြာသပတေးနေ့နံနက်သောကြာနေ့နံနက်သောကြာနေ့နေ့လည်ခင်းစနေနေ့နှောင်းပိုင်းနံနက်စနေနေ့နေ့လည်ခင်းအခြား (ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်)
တစ်ခုရွေးပါလူနာပြန်သည်MY DOCTOR မှကိုးကားထားသည်မိတ်ဆွေ / မိသားစုဝင်များမှရည်ညွှန်းသည်GOOGLE အင်တာနက်ရှာဖွေမှုအွန်လိုင်းသုံးသပ်ချက်များ (YELP, GOOGLE, FACEBOOK)NAF HOTLINE OR ACN ညွှန်ကြားရေးမှူးABORTION CLINICS ONLINE ညွှန်ကြားချက်INEEDANA.COM ညွှန်ကြားမှုယုံကြည်ခြင်းလူမှုမီဒီယာ (Facebook, Twitter / INSTAGRAM)အခြား (အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ)
SMS / စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအကြောင်းကြားစာ
FCHC (လုံခြုံသောရောင်းချသူမှစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်) SMS စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စာတိုများတွင်ချိန်းဆိုမှုသတိပေးချက်များနှင့်အခြားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆိုင်သောစာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြင်ပပါတီများထံထုတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ SMS စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုငြင်းပယ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် STOP ကိုအချိန်မရွေးပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းသို့မဟုတ် FCHC သို့စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာများပေးပို့နိုင်သည်။
SMS / စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအသိပေးချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ*
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို STOP ပြန်ကြားခြင်းသို့မဟုတ် FCHC သို့စာဖြင့်အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် SMS စာတိုပေးပို့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။